Zvese nezve vadzidzi
Zvinyorwa zvinobatsira zvevadzidzi
Iwe wakabvunza: Chii chinonzi dzidzo nezvinhu zvayo?
Chii chinonzi dzidzo nezvinhu zvayo? Zvinhu zvedzidzo zvinonzwisiswa semapato anobatanidzwa mukuita kwedzidzo, vangave vanhu, zvinhu, zviitiko, nezvimwe. Maererano naLemus (1973), pakati pezvinhu zvikuru zvedzidzo zvatinazvo: mudzidzi, mudzidzisi nechidzidzo nezvimwe zvinowira muzvikamu izvi. Ndezvipi zvinhu ...
Categories Institutiones educativas
Chii chinonzi dzidzo maererano nemabhuku?
Chii chinonzi dzidzo maererano nemabhuku? Kubva pakuona kwemagariro evanhu, dzidzo inoumbwa senzira yekushamwaridzana, iyo inotsvaga kugadzirisa uye kubatanidzwa kwechinyorwa kumamiriro ake epanyama uye evanhu, kuburikidza nekuwana zvinhu zvetsika (mutauro, unyanzvi, tsika). , mafungiro, tsika, tsika, etc.,). Chii …
Mhinduro Yakanakisisa: Dzidzo yakanga yakaita sei munguva dzekare?
Dzidzo yakanga yakaita sei muGreece yekare? Zvidzidzo zvakadzidzwa zvaive trivium (girama, rhetoric uye uzivi) uye quadrivium (arithmetic, mimhanzi, geometry uye nyeredzi), kusiyanisa pakati pezvidzidzo zvevanhu nezvechokwadi, izvo zvasvika padzidzo yemazuva ano. Tsamba dzakadzidzwa zvinonzwika kutanga, uye ipapo tsamba dzakanyorwa. …
Ndeapi hunyanzvi hwakakosha muchikoro chesekondari?
Ndeapi ari 7 akakosha kugona? Aya mano manomwe akakosha ndeaya: Linguistic Communication (CCL) Mathematical Competence uye Basic Competences muSainzi neTekinoroji (CMCT) Digital Competence (CD) Initiative uye Entrepreneurial Spirit (IEE) Kudzidza Kudzidza (AA) Social and Civic Competences (CSC) Kuziva uye Cultural Expressions (CEC) Chii chinorehwa nehunyanzvi hwekuita? Zvinofungidzirwa kuti…
Ndedzipi nzvimbo dzeruzivo mudzidzo yepuraimari?
Ndedzipi nzvimbo dzeruzivo rwekutanga? Padanho redzidzo yepuraimari tinowana: nzvimbo yeMasvomhu. Nharaunda yekukurukurirana. Nzvimbo yevashandi vezvemagariro. Sayenzi uye nzvimbo yezvakatipoteredza. Ndeapi ari nzvimbo dzedzidzo? Nzvimbo yekharikhulamu seti yezvinyorwa zvedzidzo zvinoonekwa sezvine hukama kune mumwe nemumwe. The…
Mubvunzo Unowanzo bvunzwa: Dzidzo inoitika kupi?
Dzidzo inoitika kupi? Dzidzo idanho rakaomarara muhupenyu hwemunhu, rinoitika zvakanyanya mukati memhuri uyezve mumatanho akasiyana echikoro kana ehupenyu hwedzidzo iyo munhu anofamba nayo (kubva kukireshi kusvika kuyunivhesiti). Dzidzo inoitwa sei? …
Unyanzvi hupi hwekushandisa muzvidzidzo zvemuviri?
Ndeapi hunyanzvi hwandakashandisa muPhysical Education? Kuziva kwezvinogoneka zvinogoneka zvemwana, postural control, kufema uye pfungwa dzechadenga-nguva. Ziva zvinhu zvemuviri hurongwa, chiyero, rhythm, kuzorora uye nzvimbo-nguva sangano. Kuziva kwekutanga kugona kwemuviri uye hunhu hwekufamba. Ndeipi mienzaniso yehunyanzvi hwepanyama? Ivo isimba, kutsungirira, ...
Ndeapi maitiro ane hutano edzidzo yemuviri?
Ndeapi maitiro gumi ane hutano? Aya matipi gumi achakubatsira kuti uzviite, Tevedzera kudya kune hutano uye kwakaringana. … Dzora uremu hwako. … Deredza kunwa munyu. … Wana nguva yakakwana yokurara. … Edza kuderedza kushushikana. … Gara uchisimbisa muviri. … Rega kushandisa fodya. … Zviratidze kuzuva zuva nezuva. …
Ndeupi hukama pakati pedzidzo yemuviri netsika yetsika?
Kuita zvemuviri kunokanganisa sei tsika? Mutambo unounganidza manzwiro uye manzwiro, asi pamusoro pezvose unogona kukanganisa mafungiro nemaitiro evanhu, kuburikidza nehunhu hwainotapudzira: kushanda nesimba, kuzvivandudza, kutsungirira, kuenzana, ruremekedzo, kuita zvemitambo, kubatana uye kushamwaridzana, kubudirira kwemunhu uye pamwe chete, pakati pevazhinji. vamwe. Ndeapi maitiro ane hukama…
Mhinduro yakanakisisa: Dzidzo iri sei muupenyu hwanhasi?
Dzidzo yeupenyu huri sei? Dzidzo yeHupenyu inzira inogadzirira mwana kutarisana nematambudziko ekurarama semunhu, uye inomubatsira kuti awane kuenzana nekuwirirana mune zvese zvaanoita. Chatiri kutaura chaizvo kuvagadzirira...
peji1 peji2 ... peji3,897 Next →
Kugamuchirwa kublogi rangu! Hezvino zvinyorwa zvine chekuita nevadzidzi. Zvikamu zvakasiyana zvehupenyu hwemudzidzi, kupinda kwevadzidzi uye kurongeka kwebasa zvinotariswa. Ine ruzivo runobatsira. Pano unogona kuverenga zvinyorwa zvinonakidza pamusoro pekunyora kwethesis uye bvunzo dzetemu, kutora chikamu munhaurirano pamusoro penyaya dzakasimudzwa.
VAMWE VANE KODZERO VAMWE! Zvese zvinhu zvinoiswa pane ino saiti zvine chekuita neruzivo uye zvekudzidzisa zvinangwa! Kana iwe uchitenda kuti kutumira kwechero chinhu kutyora kodzero yako, ndapota ita shuwa kutibata nesu kuburikidza nefomu rekubata uye zvinhu zvako zvichabviswa.
© 2022 Zvese nezve boka revadzidzi